Kuuriyada Waqooyi Kim ayaa wacad ku martay inuu sii xoojin doono dagaalka nukliyeerka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kuuriyada Waqooyi Kim ayaa wacad ku martay inuu sii xoojin doono dagaalka...
Kuuriyada Waqooyi Kim ayaa wacad ku martay inuu sii xoojin doono dagaalka nukliyeerka
Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong Un ayaa martigaliyay kulan militari oo looga hadlayo siyaasadaha cusub ee lagu xoojinayo awooda awooda nukliyeerka ee wadankaasi kadib marki la joojiyay wada hadaladii u dhaxeeyay Mareykanka, warbaahinta dowlada ee KCNA ayaa sheegtay maanta.
Kulankii xisbiga talada haya ee awoodda militariga ee awoodda badneyd ayaa calaamad u ahaa Kim markii ugu horreysay ee muuqaalladiisa la muujiyo muddo saddex toddobaad ah. Wuxuu sameeyay tiro aad u yar oo aan caadi aheyn dibad baxyadii labadii bilood ee la soo dhaafay iyadoo walaac laga qabo cudurka ‘coronavirus’.
Kuuriyada Woqooyi ayaa soo rogtay tallaabooyin adag oo looga hortagayo coronavirus-ka, in kasta oo ay tiri malaha kiisas la xaqiijiyey. Muuqaalka ayaa raacay shaki weyn oo ku saabsan caafimaadka Kim bishii la soo dhaafay ka dib markii uu seegay sanadguurad muhiim ah.
Wadahadalada uu hogaaminayo Mareykanka ee looga golleeyahay baabi’inta barnaamijyada Nuclear-ka iyo gantaalaha Waqooyiga Kuuriya ayaa sameeyay horumar yar tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore, gaar ahaan dagaalkii adduunka ee ka dhanka ahaa coronavirus-ka.
Shirka ayaa looga hadlay tallaabooyinka lagu xoojinayo ciidamada qalabka sida iyo “si la isku halleyn karo oo loo xakameyn karo khataraha joogtada ah ama yar ee millatari ee ka yimaada ciidamada cadawga”, ayuu yiri KCNA.
Waxaa lagu sheegay kulanka kulanka siyaasado cusub oo lagu kordhinayo xakamaynta hubka nukliyeerka ee dalka iyo in ciidamada istiraatiijiyadeed la galiyo hawlgal feejignaan dheeri ah, “ayay tiri.
“Kulankan lagu qabtay waxay ahaayeen tillaabooyin muhiim ah oo si weyn loogu kordhinayo awoodda shaqo-joojinta dabka ee madaafiicda.”
Kim laftiisu si hoose ayuu u ilaaliyay tan iyo markii uu faafay cudurka faafa ee coronavirus, isaga oo iska indhatiraya hadalada sii xoogeysanaya ee ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha ka dib markii uu seegay sanadguuradii koowaad ee qaran.
Kim wuxuu u soo muuqday si fagaare ah afar jeer bishii Abriil ilaa iyo May, marka la barbar dhigo 27 jeer isla muddadi uu ahaa sanadkii hore
Previous articlePakistan: Diyaarad rakaab oo PIA ah oo ku burburtay Karachi,
Next articleQarax ka dhacey muqdisho
sidee ayaan ku akhriyey 52 buug sannadkii tegay